रोचक Archives - Page2of 26 - PuraKhabar
May 31, 2019 Purakhabar News
धार्मिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेका मानिसहरुले धेरै उद्गारहरु भनेका छन् । जुन सामान्य दैनिकी बिताउने मानिसका लागि प्रेरक बन्छ । सत्य साईबाबाका भक्तहरु धेरै छन् । उनले केही महत्वपूर्ण भनाईहरु राखेका छन् जुन भनाई तपाईंका लागि पनि उपयोगी बन्न सक्छ । – तपाईंलाई कसैले गाली गर्छ भने उसलाई पनि प्रेम गर्न नछोड्नु । – प्रेमको अर्को रूप भनेको सेवा हो । – किराले अन्नलाई जसरी नष्ट गर्छ, कपटले त्यसैगरी मानिसलाई नष्ट गर्दछ । – बोलीको प्रहारबाट हुने घाउ वाणको घाउ भन्दा चर्को हुन्छ । – तपाईं मानवको सेवा गर्नुस् त्यो…
“युथ इन एक्सन”मा आज देशका युवा उद्यमीहरूको उपस्थिति रहने;
जेठ १७, पोखरा पोखरामा हिजोबाट संचालित “आर्ट अफ लिभिंग”को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट “युथ इन एक्सन”मा आज देशका शक्तिशाली युवा उद्यमीहरू उपस्थित हुने कार्यक्रम तय भएको छ | आर्ट अफ लिभिंग नेपालका सागर बुढाथोकीका अनुसार, देशका चर्चित युवा उद्यमीहरूले सहभागी युवाहरूलाई “देशमै धेरै गर्न सकिन्छ” विषयक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्नेछन् | विहानी सत्रको आध्यात्मिक कक्षा सकिएपछि शुरु हुने उद्यमशीलता विषयक कक्षामा इन्टरनेशनल कर्पोरेट ट्रेनर निमा प्रधानले लिडरसिप सम्बधी विशेष कक्षा दिनुहुनेछ | त्यस्तै, आइसिटीमा महिलाको भूमिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुहुने कन्ट्री डिरेक्टर अफ उमेन इन डिजिटल नेपालकी प्रमुख एलिना प्रजापति, व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व…
रानीपोखरी बनाउने जिम्मा ५० जना महिलाको
काठमाडौं–हातमा पञ्जा र शिरमा फेटा गुथेका केही महिलाहरु रानीपोखरीको एकछेउमा कोदालो र बेल्चा लिएर माटो मुछ्दै गरेका थिए । अर्को छेउमा उस्तै पहिरनमा रहेका महिलाहरु डोकोमा इट्टा बोकिरहेका देखिन्थे । पुरुषको संख्या कम थियो । पुरुषहरु इट्टाले पोखरी वरीपरि पर्खाल लगाउनतिर व्यस्त देखिन्थेँ । दरबार हाइस्कुल, जमल आकाशे पुल लगायतका स्थानबाट मानिसहरु रानीपोखरीभित्र भइरहेको काम अवलोकन गरिरहेका थिए । बाटोमा हिडिरहेकाहरु पनि पाइला अड्काउँदै रानीपोखरीलाई नियाल्दै गरेको दृश्य देखिन्थ्यो । भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरी गत वर्षको फागुन महिनादेखि पुनर्निर्माण कार्य शुरु भइरहेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपभोक्ता समिति मार्फतकाम शुरु…
अनलाइनबाटै फारम भर्न सकिने लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलायाे, कुन जिल्लामा कति ?
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला आयोगले कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन गरेकाे हो । स्थानीय तहरूले १५ हजार कर्मचारीकाे माग गरे पनि ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार बाँकी कर्मचारीका लागि बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा पुनः नयाँ भर्ना प्रक्रियाद्वारा गरिनेछ । पँच सय ५५ स्थानीय तहबाट माग भए बमोजिम सात प्रदेशमा १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी आवश्यक रहेको र सोही अनुसारको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य…
May 30, 2019 Purakhabar News
पितृ सत्तात्मक देशमा छोराको महत्व धेरै हुन्छ । जति धेरै शिक्षित परिवार भएपनि छोरा र छोरीबीचको विभेदको कुरा बाहिर आउने गरेको छ । धेरैले छोराकै चाहानाका कारण पारिवारिक सम्बन्ध विगारेका पनि छन् । छोराको चाहाना राखेकै कारण गर्भपतनको क्रम पनि बढेको छ । तर, यस्ता केही सोच र भनाईहरु छन् जसको प्रयोगले छोराको रहर पुरा हुन्छ । एक अध्ययनको नतिजा अनुसार तपाईंलाई हामी भन्दैछौं केरा खाए छोरा जन्मने सम्भावना हुन्छ । तपाईं पत्याउनुहुन्छ? संसार भर एउटा मान्यता रहि आएको छ- गर्भवती हुने समय र भइसकेपछि दैनिक रुपमा अत्यधिक मात्रामा केरा…
नेपाली कहिलेदेखि चिनियाँ नागरिक भए ?
चीनको प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिका पिपुल्स डेल्लीको अनलाइन संसकरणले केही दिनअघि एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्यो । भिडियोको शीर्षक दिइयो ‘द विज्डम अफ चाइनिज वर्किङ क्लास ।’ चिनियाँहरुले आफ्नो कामलाई कसरी सहज र सरलीकरण गर्छन् भने यहाँ भिडियो बनाइएको छ । ८ वटा छुट्टाछुट्टै कामलाई उनीहरुले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन् । पिपुल्स डेलीले सार्वजनिक गरेको भिडियोको चौँथो भागमा महिलाहरुले संरचना निर्माणका लागि आवश्यक गिट्टी तथा बालुवाहरु थुन्सेमा हालेर बोकेको देखाइन्छ । यद्यपि न त त्यो भिडियो चीनको नै थियो, न त उनीहरु चिनियाँ नागरिक नै थिए । भिडियोको पृष्ठभूमिमा बा ५ च…
“जिन्स पाईन्टमा सानो गोजी किन राखिन्छ? तपाइँलाई थाहा छ ?”
जिन्स पाइन्टमा रहेको सानो गोजी किन राखिएको हो धेरैलाई थाहा छैन। हामी त्यसको खासै प्रयोग पनि गरेका हुदैनौ र ओँदैन पनि । त्यो किन राखियो कहिल्लै सोच्दा पनि सोचे नै । मैले पनि कहिद्यदै सोचिन । त्यही हो कहिलेकाही क्वाइन राख्न काम आउँथ्यो है अरु कहिल्लै त्यसको काम आएको छैन । तर त्यो सानो गोजि केटा केटी दुबैले लगाउने पाइन्टमा हुन्छ । केटीहरु के राख्दाहुन त्यो सानो गोजिमा भनेर सोच्थे म पनि । यति सानो गोजी किन पो बनाइएको होला है । हामीले कहिल्लै पनि सोचेनौ कहिलेकाही कसैको मनमा त्यसबारे…
बढ्यो बृद्धभत्ता; हेर्नुहोस कति ?
May 29, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ हजार रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ । यसअघि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएकोमा उक्त रकम १ हजार बढाएर ३ हजार पुर्‍याइएको हो । बुधबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँले बढाइएको बताए । सरकारले बृद्धभत्ता बढाउँदा १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने पनि जनाएको छ । अति असक्त, अपाङ्गता भएका, एक महिला, लोपोन्मुख जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि मासिक १ हजार बढाइएको अर्थमन्त्रीले घोषणा…
“आफु सुत्ने ओछ्यान वरिपरि भुलेर पनि नराख्नुस यी ७ प्रकारका सामाग्रीहरु, हुनेछ अशुभ”
हरेक मानिसहरु राती सुतेपश्चात आनन्दको निन्द्रा चाहन्छन्। राम्रो निन्द्राले शारीरिक थकानको साथै मनको शान्ति समेत मिल्छ। राति सुत्दा यदि राम्रो संग निन्द्रा लागेको छैन भने त्यहाँ वास्तुसंग सम्बन्धित कुनै दोष भएको हुन सक्छ। त्यसैले राति सुत्दा यी ७ सामाग्रीहरु भुलेर पनि आफु सुत्ने खाट तथा सिरानी वरिपरि राख्ने गर्नु हुदैन । १. राती सुत्ने समयमा सिरानीमुनि पर्स तथा औषधीहरु कहिले पनि राखेर सुत्नु हुदैन। सुतेको समयमा पानीको भाँडोलाई टाउको नजिक राख्नु हुदैन किनकि यसले मनोरोग उत्पन्न गर्न सक्ने खतरा हुन्छ। ३. सुत्ने समयमा हरेक दिन यो कुराको याद गर्नु पर्ने…
सुखी जीवनको रहस्य
May 28, 2019 May 28, 2019 Purakhabar News
पुरानो लोक कथा अनुसार एक व्यापारी अत्यन्तै धनी थिए। उनको धेरै धन-सम्पति थियो, तर उनको मन शान्त थिएन। हरसमय उनी तनावमा हुन्थे। एक दिन उनी दोस्रो गाउँबाट आफ्नो गाउँ फर्किरहेका थिए। बाटोमा उनले एक आश्रम देखे। उनी आश्रममा गए र त्यहाँ उनले एक सन्त देखे। उनले सन्तलाई प्रणाम गरे र आफ्ना समस्याका बारेमा बेलिबिस्तार लगाए। उनका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेपछि सन्तले उनलाई विनम्रता प्रकट गर्दै केही समय त्यहीं ध्यान गरेर बस्न आग्रह गरे। उनले ध्यान गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरे तर त्यसको बाबजुद पनि उनले ध्यान गर्न सकेनन्। उनको मन कहिले यता…